थुमाको रगतको शक्ति | eBachan Nepali Christian Magazine
थुमाको रगतको शक्ति
पास्टर प्रेमनारायण भट्टराई
तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूका निम्ति चिन्ह हुनेछ । जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु, र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने विपत्तिले तिमीहरूलाई छुनेछैन (प्रस्थान १२ः१३) । यहाँ प्रस्थान १२ अध्यायको १ पद देखी २० पद सम्म परमप्रभुले मोशालाई निस्तार चाडको स्थापनाको विषयमा उहाँको स्पष्ट योजना बताउनुभएको छ ।
परमेश्वर मिश्रमा भएका पहिलो जन्मेकाहरूलाई नष्ट गर्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो । यसको कारण चाहिं मिश्रमा भएका भूmठा देवताहरूको विरूद्धमा परमेश्वरले आÇनो शक्तिलाई प्रमाणित गर्नको निम्ति पनि थियो । यसको निम्ति उहाँको एउटा सर्त थियो कि जसको ढोकामा रगत छर्किएको छ, त्यस घरको पहिलो जन्मिएको (जेठो) लाई केही गर्नुहुने थिएन । जसको घरको ढोका थुमाको रगत थिएन, त्यस घरमा विपत्ती प¥र्यो । यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा, थुमाको रगत बगाएर मात्र पर्याप्त थिएन तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु नै पथ्र्यो । निस्तारको दिन, एउटा छुटकाराको दिन थियो जसलाई इस्राएलीहरूले मिश्रको दासत्वबाट परमेश्वरले दिनुभएको छुटकाराको स्मरणको निम्ति इस्राएलीहरूले उत्सवको चाड मनाउन शुरू गरे । यो एउटा जातीले मिश्रको राज्यबाट पाएको ताड्ना र दुःखको अन्त्य र छुटकाराको दिन थियो । यो छुटकाराको नेतृत्व मोशाले गरेका थिए ।
नयाँ करारका यहूदी मतबाट विश्वास गर्ने यहूदीहरू तथा इसाईहरू पनि येशूलाई निस्तारको वलिदान हुनुभएको थुमाको रूपमा स्वीकार गर्दथे । गमलियलको अधिनमा शिक्षा पाएका पावल आफैं पनि लेख्छन्, “मसिह हाम्रो निम्ति वलि हुनुभएको हो” (१ कोरिन्थी ५ः७) । येशू पनि निस्ताको थुमालाई वलि चढाएर रगत बहाउने समयमा नै त्रूmसमा चढेर वलि हुनुभएको थियो (यूहन्ना १९ः१४) । निस्तारको थुमाको कुनै पनि हडी भाँचिएको हुनुहुँदैनथ्यो, येशूको पनि कुनै हडीहरू भाँचिएका थिएनन् (यहून्ना १९ः३२–३६) । यसको अर्थ थुमा निष्कङ्क र निष्खोट हुनुपर्छ, कुनै चोटरहित हुनुपर्छ भन्ने पनि थियो । येशूले निस्ताको थुमाको निम्ति राखिएका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरि वलिदान हुनुभएको थियो । येशूको त्रूmसको मृत्युअघिको अन्तिम रात्री भोजमा पनि निस्तार चाडको एउटा भोज थियो । येशूले बाँड्नुभएको रगत र शरीरको करार निस्तार चाडको निम्ति सम्झना र अर्को अर्थमा छुटकाराको चिन्ह पनि थियो (लूका २२ः१९–२०) ।
प्रस्थाको पुस्तकमा परमेश्वरले मोशालाई अह्राउनुभएको विवरणमा एउटा पशु थुमा (भेडाको पाठो) दिइएको थियो (प्रस्थान १२ः२९) । यो मिश्री र मिश्रका राजा फारोबाटको छुटकाराको निम्ति अन्तिम विपत्ती पनि थियो । वास्तवमै यो विपत्तीपछि चाहिँ मिश्री राजा फारोले इस्राएलीहरूलाई छुटकारा पनि दिए (प्रस्थान १२ः१४) । थुमाको रगत बगाउनु, यसको मासु पोलेर खानु र रगत ढोकामा लगाउनु भन्नुभएको थियो । बप्तिष्मा दिने यहून्नाले येशूलाई त्यही थुमाको रूपमा चिनाएका छन् (यूहन्ना १ः२९) । येशूलाई खोटरहित थुमाको रूपमा पत्रले उललेख गर्दछन् (१पत्रूस १ः१९) । पापबाट साँचो छुटकाराको रगत बहाउने थुमा येशू हुनुहुन्थ्यो भनेर हिब्रूका लेखकले उल्लेख गरेका छन् (हिब्रू ४ः१५) ।
जसरी मिश्रको बन्धनबाट छुटकाराको निम्ति एउटा थुमा र त्यसको रगत आवश्यक थियो ठीक त्यसैअनुरूप आज पापको बन्धनबाट छुटकाराको निम्ति थुमाको रगको आवश्यकता छ । पहिलो निस्तारको दिन प्रस्थानमा,जसरी निस्ताको थुमाको रगतले विपत्तीबाट जोगाएर एउटा जातीलाई छुटकारा दियो । आज, मानिसजातीलाई छुटकाराको निम्ति थुमा र त्यसको रगतको आवश्यकता थियो र येशूले त्यो आवश्यकता पूरा गर्नुभएको छ । येशूले एउटा थुमाको रूपमा दिनुभएको छुटकाराचाहिँ पापबाट अनन्तताको निम्ति दिनुभएको छुटकारा हो । इस्राएलीहरूले पहिले र अहिले पनि यहूदीहरूले मिश्रको छुटकारको सम्झनामा थुमालाई रगत बहाएर सम्झना र उत्सव मनाउँछन् ठीक त्यसै गरी हामीले पनि येशूको रगतको बहाइ र यसबाट हामीलाई संसारको पाप र बन्धनबाट दिनुभएको छुटकाराको सम्झना स्वरूप उहाँको मृत्यु र पुनरूत्थानलाई सम्झनु पर्छ (१ कोरिन्थी ११ः२६) । येशूको रगतले उहाँमा पापको छुटकारा दिंदछ (एफिसी १ः७) । तर येशूको रगत र त्यसको छुटकारासँगै भुल्न नहुने कुरा चाहिँ उहाँको दुःख हो । निस्तार चाडमा झैं हामी छुटकारा र त्यसको उत्सवलाई बढी जोड दिन्छौ, यो आवश्यक कुरा हो र महत्वपूर्ण पनि तर यसको निम्ति त्यो थुमाले गुमाएको जीवन, भोगेको दुःखलाई चाहिँ महत्वको ठान्दैनौं । येशूमाथि विश्वास गर्ने उहाँका साँचो चेलाको रूपमा हामीले उहाँले भोग्नुभएको दुःखलाई राम्ररी मनन गर्नैपर्छ ।
प्रस्थानमा दिइएको थुमा हरेक घरको निम्ति घरको मालिकले चढाउनु, रगत बहानु र घरको ढोकामा त्यसको रगत छर्कनु प¥थ्र्यो । त्यस वलिदानले मिश्रबाट छुटकाराको निम्ति निश्चित उद्देश्यलाई पूरा गरेको थियो । अहिले नयाँ करारमा येशूले थुमाको रूपमा दिनुभएको वलिदानले यी कामहरू गरेको छ ः
१. परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई मिलाप ः उत्पत्तिमा अनाज्ञाकारिताको कारणले मानिस र परमेश्वरको बीचमा टुटेको सम्बन्धलाई मिलाप गराएर पुनः एक बनाएको छ ।
२. पापबाट छुटकारा ः मानिसको पापको छुटकाराको निम्ति एकैपटक सबैको निम्ति वलिदान भएर पापबाट छुटकाराको मोल थुमाको वलिदानले पूरा गरेको छ ।
३. हामीलाई धर्मीकरण ः हामी अझ पनि धर्मी भएका होइनौं, शरीर र संसारका अझ पनि पाप दोहो¥याउने सम्भावना छ तर थुमाको रगतले हामीलाई धर्मी ठह¥याएको छ ।
४. हाम्रो शुद्धता ः हामी धर्मी ठह¥याइएता पनि शुद्ध र सिद्ध छैनौं तर उहाँको येशूको रूपमा विस्तारै निर्माण हुने क्रममा शुद्धताको प्रक्रियामा छौं ।
५. अंधकारको राजा (शैतान) माथि विजय ः हामी थुमाको वलिदान पश्चात अझै पाप र यसको मालिक तथा अंधकारको राजा शैताको दासत्वमा छैनौं तर त्यसमाथि विजय भएका छौं ।
यी त भए केही उपलब्धीहरू जुन येशूको वलिदानबाट हामीले प्राप्त गरेका छौं । निस्तारको थुमाले मिश्रको दासत्वबाट इस्राएलीहरूलाई छुटकारा दिने शक्ति राख्दथ्यो र सो पूरा पनि ग¥यो । येशू अर्थात थुमाको रगतको शक्तिले अहिले हाम्रो निम्ति के गर्दछ त ः
१. हाम्रो मृत्युको चिहानलाई खोल्दछ ः एकपटक हामी जन्मसिद्ध पापको कारणले मृत्युको अधिनमा थियौं । हामी शारीरिक मृत्युको साथै आत्मिक मृत्युको सिकार पनि थियौं तर येशूको रगतले त्यो आत्मिक मृत्युको चिहानलाई उघारेर हामीलाई जीवित बनाएको छ । हो, शारीरिक मृत्यमा हामी पर्छौं कारण चाहिँ एकपटक शरीरमा हामी पापसँगै जन्मिएका छौं तर येशूको रगतको कारणले हामीले चिहानमाथि पनि विजय पाएका छौं । यसको अर्थ चाहिँ शारीरिक र आत्मिक दुवै मृत्यको चिहानमाथिको विजय हो ।
२. हाम्रो निम्ति स्वर्गको ढोकालाई खोल्दछ ः अब शारीरिक र आत्मिक दुवै मृत्यु र यसको चिहानमाथिको विजय पछि हामी र हाम्रो निम्ति स्वर्गको ढोकापनि खोलिएको छ । अब हामी केवल यो संसारको नागरिक मात्र होइनौं तर स्वर्गका नागरिक हौं । यसको अर्थ हाम्रो निम्ति स्वर्ग खुल्ला गरिएको छ ।
३. येशूलाई हाम्रो हृदयको मालिक बनाउँदछ ः हाम्रो हृदयचाहिँ शरीर र आत्मा दुवैको निम्ति उत्तिकै महत्वपूर्ण भाग हो । शरीर र आत्मा दुवै पक्षलाई चलाउन हृदयको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदछ । थुमाको रगतको शक्तिले हाम्रो हृदयको प्रभु उहाँ येशूलाई नै बनाएको छ । तर यसको निम्ति उहाँमाथिको विश्वासको आवश्यकता पर्दछ ।
Previous: नेपालका हरेक कार्यक्षेत्रमा परमेश्वरको राज्यका अगुवाहरु
Next: Christian Records and Resource Center